အနမ်းဝိညာဉ်: October 2013
ဒါလား living together
2:00 pm | Labels: ဓါတ်ပုံ, ဗဟုသုတ, အချစ်
လူငယ်အတွဲ စုံတွဲ (၅၀)ကျော် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ Anhui ခရိုင်က အနမ်းပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါ... ပြိုင်ပွဲအတွင်း မူးလဲသူတွေက မူးလဲ...မေ့လဲသူတွေက မေ့လဲ... ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ အကြိုတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ... နောက်ဆုံးမှာတော့ ၂ နာရီနဲ့ ၄၃ မိနစ်ကြာအောင် အဆက်အပြတ် အနမ်းပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်စုံတွဲ တစ်တွဲက အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်... အနိုင်ရတဲ့ စုံတွဲကတော့ တရုတ်ယွမ်းငွေ (၅၀,၀၀၀)တန်တဲ့ စိန် ၁ ကာရက်(1 carat) ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်..
(မှတ်ချက်...ခံတွင်းသန့်ရှင်းရေး...ပါးစပ်သန့်ရှင်းရေတို့...လုပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မိမိရဲ့အဖော် မူးလဲပြီး...ရှုံးပွဲနှင့်ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိနိုင်သည်.. (3-1-2012 ရက်စွဲနဲ့ လွမ်းမပြေ သုတရပ်ဝန်းမှာ တင်ခဲ့တဲ့ ပို့စ်ကို ပြန်လည်ဖော်ပြသည်..)
Posted by soulkiss
1:32 pm | Labels: ဗဟုသုတ, မှတ်သားစရာ
အစ်ကိုမောင်မောင်ရေ အစ်မခင်နှင်းက တွေ့ ချင်လို့ အိမ်ကို လာခဲ့ပါတဲ့ ခင်နှင်းရဲ့ မောင်ဖြစ်သူ ကျော်ကျော်က ကျောင်းသွားရင်း ကျွန်တော့်ကို ၀င်ပြောသွားသည်။
ခင်နှင်း နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် သွားလုပ်တာ ၃ နှစ်နီးပါးကြာပြီးနောက် နေမကေင်းသဖြင့် ပြန်လာသည်ကိုတော့ ကြားသည်။တခေါက်မှ မရောက်ဖြစ်သေး ။ ခုတော့ သူကိုယ်တိုင် ခေါ်ခိုင်းနေပြီမို့ညနေဖက် အိမ်မှ ထွက်ခဲ့သည်။
အိမ်ရှေ့ တွင် ခင်နှင်းရဲ့ ညီမငယ်လေး စုစု ကစားနေသည်။ ကျွန်တော် အိမ်အပေါ်ထပ်သို့ တန်းတက်ခဲ့သည်။ ခင်နှင်းက ခြေသံ ကြားသဖြင့် ခေါင်းထောင်ကြည့်သည်။ ကျွန်တော် အနား ရောက်သွားသည်နှင့်။ အကို မောင်မောင် ကတော့ ငါ့ညီမလေး ဘယ်လို
ဖြစ်နေသလဲလို့သတင်းတောင် လာမေးဖေါ် မရဘူး။ ခေါ်ခိုင်းမှပဲ ပေါ်လာတော့တယ်နော်။
မဟုတ်ပါဘူး ခင်နှင်းရယ် အကိုလည်း ဒီရက်မှာ အလုပ် နဲနဲ များနေလို့ မလာဖြစ်သေးတာပါ။ ခင်နှင်း ပြန်ရောက်တာ အကို ကြားပါတယ်။
ခင်နှင်းကို ကြည့်ရတာ အသားအရေ ဖြုဖတ် ဖြုရော် နှင့် တော်တော်လဲ ပိန်သွားသည်။ ဟိုတုံးက ခင်နှင်းနှင့် လုံးဝ မတူတော့။ ခင်နှင်းနှင့် ကျွန်တော်က ၄ နှစ်ကွာသည် ။ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်နီးချင်း နေလာသည်မို့ မောင်နှမ အရင်းကဲ့သို့ သံယောဇဉ်ရှိသည်။
တခုတော့ရှိသည် ခင်နှင်းက ဘယ်တော့မှ ကျွန်တော့်ကို အကိုဟု မခေါ်။ ကျွန်တော့် နာမည်ပါ တွဲခေါ်သည်။ သူ့ ကိုယ်သူတော့ ခင်နှင်းက ညီိမလေးကဟု ပြောတတ်သည်။
တနေ့ တွင် ခင်နှင်းက ကျွန်တော့်အား။ အကိုမောင်မောင် ပြောစရာရှိလို့။
ပြောလေ ညီမလေး ဘာပြောမလို့ လဲ။အစ်မ ၀မ်းကွဲ မမသက်ကို သိတယ် မဟုတ်လား။
အင်းသိတယ်လေ နိုင်ငံခြားမှာ မဟုတ်လား။
ဟုတ်တယ် သူခေါ်လို့ ခင်နှင်းလဲ အဲဒီကို လိုက်သွားပြီး အလုပ် သွားလုပ်မလို့ ။
ဖြစ်ပါ့မလား ခင်နှင်းရယ် ခုချိန်ထိ ကျောင်းတက်တာကလွဲပြီး ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘူးတဲ့သူက နိုင်ငံခြားမှာတောင် အလုပ်သွား လုပ်မယ်ဆိုတော့။
ဖြစ်ပါတယ် အကိုမောင်မောင်ကလဲ ဒီခောတ်မှာ လူတိုင်းပဲ တော်တော် များများ သွားလုပ်နေကြတာ အထူးအဆန်းမှ မဟုတ်တာ။
ခင်နှင်း ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ ။
ဘာမှဒါပေမဲ့ မနေနဲ့ အကိုမောင်မောင် အဖေက စက်ရုံလုပ်သား အမေက ဈေးထဲမှာ ဈေးရာင်းပြီး ခင်နှင်းတို့ မောင်နှမ ၃ ယောက်ကို လုပ်ကြွေးလာတာ သူတို့ ပင်ပန်းလှပါပြီ ။ ဒီတစ်ခါ ခင်နှင်းအလှည့် အောက်မှကလဲ မောင်လေးနဲ့ ညီမလေးကလဲ ရှိသေးတယ်
ခင်နှင်းဟိုမှာ ၃ နှစ် လောက် ကျိုးစားပြီး အလုပ် လုပ်မယ် ပိုက်ဆံစုမယ်။ ပြီးရင် ဒီကို ပြန်လာပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်း လုပ်မယ် မကောင်းဘူးလား။
ခင်နှင်း ပြောစကားက အကြောင်းပြချက် ခိုင်လုံနေသည်မို့ကျွန်တော် ဘာမှ မပြောသာတော့။
အင်းလေ ညီမလေး ကောင်းမယ် ထင်တာသာ လုပ်ပါတော့ ။ ဒါနဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကရော။
အဲဒါ ဘာမှ ပူစရာ မလိုဘူး မမ သက်က သူစိုက်ပေးထားမှာ ဟိုရောက်တော့မှ အလုပ် လုပ်ပြီး ပြန်ဆပ်ရမှာ။
ခင်နှင်းသွားသည့်နေ့မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်တွင်။
ခင်နှင်း ညီမလေး အကိုတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်။
တစ်ခုမပြောနဲ့ ဆယ်ခုပြော ။ ခင်နှင်းက မျက်စောင်းထိုးယင်း ပြောသည်။
တကယ် ပြောမလို့ မနောက်နဲ့ ။
ကဲပါ အကိုမောင်မောင် ပြောတာ ခင်နှင်း နားထောင်မယ်။ ပြီးတော့ လိုက်နာပ့ါမယ် ဂတိပေးပါတယ်ရှင်။
အင်း ဒါဆိုလဲပြီးရော ။ ညီမလေး ဟိုရောက်ရင် အလုပ်ကို ကျိုးကျိုး စားစားလုပ်။ ပိုက်ဆံကို သေသေ ချာချာစု။ သူငယ်ချင်း ပေါင်းရင်လဲ သတိထားပြီးပေါင်း။ အားရင် စာဖတ်။ ပြီိးတော့ ဘုရားလဲ ရှိခိုး။ မိဘတွေကိုလည်း ညတိုင်း ကန်တော့ပြီးမှ အိပ်နော်။
ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကိုကြီး ဒါပဲလား ကျန်သေးလား။ ခင်နှင်းက ငေါ့ပြီး မေးသည်။
ကျမ္မာရေးလဲ ဂရုစိုက်နော် ဒါပဲ ခင်နှင်း အမေကလဲ ၀င်ပြောသည်။ သမီးအကို ပြောတာတွေကို သေသေ ချာချာ မှတ်ထားနော်။ ကဲသမီး သွားတော့ ဟိုမှာ သူများတွေတောင် ၀င်နေပြီ။
ခင်နှင်းက သူ့ အဖေ နှင့် အမေအား ထိုင်ကန်တော့ပြီး ကျွန်တော့်အား။ အကိုမောင်မောင် အဖေနဲ့ အမေကို ဂရုစိုက်ပေးနော်။ မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုရောပဲ။
အေးပါ ညီမလေးရယ် ဒါတွေ ဘာမှ ပူမနေနဲ့ ။ အကို့ တာဝန်ထား ။အကို အားလုံး ကူညီမယ်။ ကဲညီမလေးသွားတော့။
ီဒီလိုနဲ့ ခင်နှင်း နိုင်ငံခြားသို့ ထွက်သွားတော့သည်။။။
အကိုမောင်မောင် ဘာတွေ စဉ်းစားနေတာလဲ ညီမလေးခေါ်နေတာ ဆယ်ခွန်းလောက် ရှိနေပြီ။ ခင်နှင်း စကားသံကြားမှ ကျွန်တော်လည်း သတိ ပြန်လည်လည်လာပြီး။
သြော် ဘာမှ မစဉ်းစားပါဘူး ညီမလေးရယ်။ ကျွန်တော်က ပိန်သွယ်နေသော ခင်နှင်း လက်ဖမိုးလေးအား အုပ်ကိုင်ယင်း။ ညီမလေးက ဘာရောဂါ ဖြစ်တာလဲ လိုအပ်ရင် ဆေရုံ တက်လိုက်ပါလား။
ခင်နှင်းက ခေါင်းကို ခါရမ်းယင်း ။ အကိုမောင်မောင် ခင်နှင်း အခုပြောတာတွေကို အဖေနဲ့ အမေကို ပြန်မပြောပါဘူးလို့ ဂတိပေးပါလား။
ဘာတွေ ပြောမှာမို့ လို့ လဲ ညီမလေးရယ်။
မရဘူး အကိုမောင်မောင် ဂတိ အရင်ပေးပြီးမှ ညီမလေးပြောမှာ။
ကဲပါ ညီမလေးရယ် ဂတိပေးပါတယ် ဘယ်သူ့ ကိုမှ မပြောပါဘူး။ ကဲ ပြောတော့။
ဒီလို အကိုမောင်မောင်ရဲ့ခင်နှင်း အဲဒီကို ရောက်တော့ စားသောက်ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုး လုပ်ရတယ်။ အားလုံး မိန်းကလေး ၆ ယောက်ရှိတယ်။ အားလုံးကို အုပ်ချုပ်တဲ့ စူပါဗိုက်စာ တရုပ်မလဲ ရှိတယ်။ ခင်နှင်းက ရောက်ခါစဆိုတော့ သူတို့ ဆီမှာ ပြောတဲ့ စကား မတတ်သေးတော့ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ ပြောရတယ်။ ဒီလိုနဲ့၆ လလောက် ကြာလာတော့ စကားလဲ တတ်လာပြီ ။ လုပ်ငန်းလဲ ကျွမ်းကျင်လာပြီ။ ပြီးတော့ ဆိုင်ကို အမြဲ လာစားနေကျ ဖေါက်သယ်တွေနဲ့ လဲ ရင်းနှီးလာပြီ။ ခင်နှင်းက အလုပ်ကို မခိုမကပ် လုပ်တော့ သူဌေးကလည်း သဘောကျတယ်။ လာစားတဲ့ ဖေါက်သယ်တွေကလဲ ခင်ကြတယ်။
သူဌေးက ခင်နှင်းကို တဖြည်းဖြည်းန့ဲ လစာ တိုးပေးတယ် ဒီလိုနဲ့ တစ်နှစ်လောက် ကြာတော့ အဟုန်လို့ ခေါ်တဲ့ တရုပ်တယောက်နဲ့ ခင်မိတယ်။ ဆိုင်ကို လာရင်လဲ တခြား စားပွဲထိုးတွေကို မခေါ်ပဲ ခင်နှင်းကိုပဲ ခေါ်တယ် ။ အဲ ဒီအဟုန် နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လာစားရင် စကားကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောပြီး ခိုင်းတတ်တယ်။ စားပြီးလို့ပြန်ရင်လဲ ငွေရှင်းလို့ပိုတဲ့ပိုက်ဆံဆိုရင် ခင်နှင်းကို အမြဲပေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တနေ့တော့ ခင်နှင်းနဲ့ အတုတူ လုပ်တဲ့ အစ်မ မအေးက ခင်နှင်း နင့်ကို အဟုန်က ကြိုက်နေတယ် ငါ့ကို ပြောပေးပါလို့ ပြောတယ် နင်ဘယ်လို သဘောရသလဲ။
ဟာ အစ်မကလည်း ဘာဖြစ်လို့ ပြန်ကြိုက်ရမှာလဲ ခင်နှင်းတို့ က ပိုက်ဆံ လာရှာတာ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ကြရမှာ။ အပူ မရှာချင်ပါဘူး။
အေးလေ စဉ်းစားပါဦးဟာ အချိန်တွေ ရှိသေးတာပဲ။
မအေး ကလဲ အားတိုင်း ခင်နှင်းကို အဲဒီ အကြောင်းပဲ ပြောတယ်။ တနေ့ ခင်နှင်တို့ ဆိုင်ပိတ်လို့မြို့ ထဲသွားဖို့ ကားစောင့်နေတုံး အဟုန်ကားနဲ့ ရောက်လာပြီး။
မအေး တို့ ပါလား ဘယ်သွားမလို့ လဲ။
ကျွန်မတို့ မြို့ ထဲသွားလို့ ပါ။
ခင်နှင်းလဲ ပါတာကိုး လာ ကျွန်တော်လဲ မြို့ ထဲသွားမှာ လိုက်ခဲ့ပါလား။
ရပါတယ် ဘတ်စ်ကားနဲ့ ပဲသွားမယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ခင်နှင်း ငြင်းလိုက်တယ် ။
အဟုန်က မအေး ကိုကြည့်လိုက်ပြီး ။
လာပါ ဘာမှ အားနာနေစရာ မလိုပါဘူး လူရင်းတွေပဲ တစ်ခါတစ်လေ လမ်းကြုံ လို့ ကူညီရတာပါ။
အေးလေ ခင်နှင်းကလဲ အဟုန် ကို အားနာစရာကြီး လာပါဟာ။
မအေး လဲ သူ့ ဘက်ပါသွားပြီမို့ခင်နှင်းလဲ အားနာနာ နဲ့ ပဲ အဟုန်ကားနဲ့ မြို့ ထဲကို လိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ မြို့ ထဲ ရောက်တော့ အဟုန်က တစ်ခုခု ကျွေးပါရစေဆိုတာနဲ့ဆိုင် တစ်ဆိုင်မှာ ၀င်စားကြပြန်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အဟုန်လည်း နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ခင်နှင်းတို့ အပြင်ထွက်တိုင်း အဟုန် ရောက်ရောက်လာတာ တွေ့ ရတယ်။
ကြည့်ရတာ မအေးနဲ့ အဟုန် အဆက်အသွယ် ရှိပုံ ရပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ တရုပ်နှစ်သစ်ကူးမှာ ခင်နှင်းတို့ ဆိုင် ၅ ရက်ပိတ်ပါတယ်။
အဲဒီပိတ်ရက်မှာ အဟုန်က ခင်နှင်းနဲ့ မအေးကို ဟန်းဖုန်း တစ်လုံးစီ ၀ယ်ပြီး လက်ဆောင်ပေးပါတယ်။
ခင်နှင်းက အတန်တန် ငြင်းပေမဲ့ မအေး က နှစ်သစ်ကူး လက်ဆောင်ဆိုတာ မငြင်းကောင်းဘူးဆိုတာနဲ့ ယူလိုက်ရပါတယ် ဟန်းဖုန်းလဲရရော ညဖက် ဆိုင်သိမ်းပြီးလို့ အိမ်ရောက်တာနဲ့အဟုန်က ခင်နှင်းဆီ အကြောင်း မရှိအကြာင်းရှာပြီး ဖုန်းဆက်ပါတော့တယ်။
မအေး ကလည်း ပြောတယ်။ ခင်နှင်းကလဲ တရုပ်သူဌေး သားက ကိုယ့်ကို ကြိုက်နေတာပဲ ပြန်ကြိုက်ပီး ချူစားပေါ့ ဟ။
ဟာ မအေး ကလဲ ပြန်ကြိုက်ရုံ ကြိုက်လို့ ရမလား နောက်ပိုင်း မတော်တရော်တွေ ဖြစ်ကုန်ရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ့ ကျွန်မပဲ စိတ်ဆင်းရဲရမှာ။
ခင်နှင်းကလဲ အဲဒီအတွက် မပူပါနဲ့ ဟယ် ငါကူညီမှာပေါ့။
အဲဒီအချိန်ကစပြီး ခင်နှင်း လူပေါင်းမှားပြီဆိုတာ သတိ မထားမိခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ ခင်နှင်းနဲ့ အဟုန် ချစ်သူတွေ ဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့။
အဟုန်ကားလေးနဲ့ ခင်နှင်းတို့ သွားလေရာ မအေးလဲ ပါတယ် ။ ခင်နှင်း ကို ဘာပဲ ၀ယ်ပေးပေး အဟုန်က မအေးကိုလည်း ၀ယ်ပေးတယ်။
မအေးလဲ ပျော်နေတာပေါ့။ နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့ နာပါ အကိုမောင်မောင် ။ နောက်ပိုင်း ချစ်သူတို သဘာဝ လွတ် ၂ လပ် ၂ တွေ့ ကြတော့ ခင်နှင်း အရမ်းကြောက်တယ် ။ အဲဒီမှာပဲ ဆရာမကြီး မအေးက ဆေးခန်း တစ်ခုကို ခေါ်သွားပြီး လိုအပ်တဲ့ အကာအကွယ်တွေ အားလုံး လုပ်ပေးတယ် ။ လတိုင်း လဲ အဟုန်က လခ နီးပါးပဲ ပိုက်ဆံတွေပေး လိုချင်တာတွေ ၀ယ်ပေးတော့ ခင်နှင်းလဲ အဟုန်နဲ့နေရတာပျော်လာတယ် အကိုမောင်မောင်။ အိမ်ကိုလဲ လတိုင်း ပိုက်ဆံ များများပို့ နိုင်တော့ အမေတို့လဲပျော်နေကြတာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ခင်နှင်း အဟုန်နဲ့ တွဲနေတာ တစ်နှစ်လောက်ကြာတော့ ကျမ္မရေး နဲနဲ ချူချာလာတယ်။ အစကတော့ အလုပ်ပင်ပမ်းလို့ဖြစ်တယ်လို့ ပဲထင်ထားတာ ။ တစ်ခါ တစ်ခါဆိုရင် ချည့်နဲ့ ပြီး အားကုန်သွားသလိုပဲ မလှုပ်ချင်တော့ဘူး။
ခင်နှင်း အဲဒီလိုဖြစ်တာ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ် လုပ်တာ ၃ နှစ်ထဲကို ၀င်လာတဲ့ အချိန်ပဲ ။ အဲဒီလို ခင်နှင်း နေမကောင်းဖြစ်စမှာပဲ မအေးလဲ မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားတယ်။ အဟုန်လဲ ခင်နှင်း နေမကောင်းဖြစ်နေတော့ ပိုက်ဆံတွေလဲပေးတယ် ဂရုလဲ စိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ခင်နှင်း နေမကောင်းတာ ကြာလာတော့ အဟုန် မလာတော့ဘူး။
ဖုန်းခေါ်ရင်လဲ မကိုင်ဘူး နောက်ဆို ဖုန်းကို ပိတ်ထားတော့တယ် ။ နောက်ပိုင်း ခင်နှင်း ချောင်းအရမ်းဆိုးလာတာနဲ့တီဘီရောဂါ ဖြစ်မှာစိုးလို့ ဆေးခန်း တစ်ခုမှာ သွားပြလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာဝန်က ခင်နှင်းကို ဆေးစစ်တယ်။ အဲဒီလို စစ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာပဲ ခင်နှင်း ဘ၀ ဆုံးသွားပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ် အကိုမောင်မောင်။
ဆရာဝန် က အမျိုးသမီး ဆရာဝန်ဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ ခင်နှင်းကိုမေးတယ်။
ညီမလေး ဘာအလုပ် လုပ်တာလဲ ။
စားသောက်ဆိုင်မှာ စားပွဲထိုးပါ ။
လက်မထပ်ရသေးတဲ့ ချစ်သူတော့ ရှိပါတယ် ။
အတူတူ နေကြတာလား ။
ဟုတ်ကဲ့ ။ ၂ရက်ခြား ၃ရက် ခြားတော့ တွေ့ ဖြစ်ကြပါတယ် ။
အဲဒီလူနဲ့ အတူတူနေတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ။
တစ်နှစ်ခွဲ လောက်ရှိပါပြီ ။
သူ့ ကိုရော ဒီဆေးခန်း ကို ခေါ်လာလို့ ရမလား ။
အဲ့ဒီလိုမေးတော့ ခင်နှင်း မျက်ရည်စို့ လာပြီး
ခေါ်လို့ မရတော့ဘူး ဒေါက်တာ ကျွန်မဆီလဲ မလာတော့ဘူး ။ ဖုန်းခေါ်ရင်လဲ ပိတ်ထားတယ်။
အင်းစိတ်မကောင်းပါဘူး ညီမလေးရယ် သေခြာပါပြီ ဒီရောဂါ အဲ ဒီလူဆီက ကူးတာပဲ ဖြစ်မယ်။
ကျွန်မဘာဖြစ်တာလဲ ဒေါက်တာ ပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောပါ ။ ကျွန်မ လိုအပ်တာ အားလုံး လုပ်ပါ့မယ်။
စိတ်ခိုင်ခိုင်ထားနော် ညီမလေး အရမ်းလဲ အားမငယ်နဲ့ညီမလေးရောဂါက AIDS
ရှင် ခင်နှင်းမေ့လဲမတတ်ဖြစ်သွားတယ် ။ဒါဆိုကျွန်မ သေတော့မှာပေါ့နော် ။ အငမ်းမရ မေးလိုက်တယ် ။
ချက်ချင်းတော့ မသေနိုင်သေးပါဘူး ညီမရယ်။
အဲဒီလို သိလိုက်ရတော့ ခင်နှင်းလေ ဒေါက်တာရှေ့ မှာ ငိုနေတာ တော်တော်ကြာတယ်။
ဆရာဝန်က ခင်နှင်းကို နေမကောင်းဘူးလို့ ပြောပြီး မြန်မာပြည်ကို ပြန်လိုက်ပါ ညီမရယ် အဲဒီလိုဖြစ်မှပဲ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့ ငါးစာသာမြင်ပြီး ငါးမျှားချိတ် မမြင်ဘူ ဆိုတဲ့ စကားပုံကို သွားသတိယမိလိုက်တော့တယ်။ ငါးမျှားချိတ်မှာ ချိတ်မိတဲ့ငါးဟာ ပြန်လွတ်ရိုး ထုံးစံ မရှိသလို ခင်နှင်း ဘ၀လဲ အသက် ပေးရတော့မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ပါပြီ။ခင်နှင်းကပြောလဲပြော ငိုလဲငို နှင့်မို့ ကျွန်တော်ကြည့်ရင်း တော်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသည် ။
ဘယ်လို အားပေးစကား ပြောရမှန်းပင် မသိတော့။ခင်နှင်း ပြောခဲ့ချင်တာက ခင်နှင်းကို ငွေမက်ပြီး ချူစားချင်လာအောင် မက်လုံးပေးပြီး ကူညီသလိုနဲ့ စည်း၇ုံးသိမ်းသွင်း ဖျက်ဆီးတတ်ကြတဲ့ မအေး လို မိန်းကလေး သူငယ်ချင်းမျိုးတွေကို သတိထားစေချင်လို့ ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အကိုမောင်မောင် စကားကို နားမထောင်ပဲ နားယောင်ခဲ့မိတဲ့ ခင်နှင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့ အမှားလဲပါ ပါတယ်။တော်ပါတော့ ညီမလေးရယ် ရော့ ရေသောက်လိုက်ဦး။ကျွန်တော် ရေတစ်ခွက် ခပ်ပေးလိုက်ရင်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
ခင်နှင်းလဲ ရေသောက်ပြီး မောသွားတာကြောင့် ဘာမှ မပြောတော့ပဲ ကျွန်တော့်ကိုသာ စိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်။နောက် ၄ လလောက် ကြာတော့ ခင်နှင်းလဲ အဲဒီရောဂါနဲ့ ပဲ လူ့ လောက ကနေအြ့ပီးအပိုင် ထွက်ခွါသွားပါတော့တယ်။ယောင်္ကျားတစ်ယောက်နဲ့ တရားဝင် လက်မထပ်ပဲ သိုသို သိပ်သိပ် နေခဲ့ကြပြီး ခင်နှင်းလို ဘ၀ ဆုံးသွားသောမိန်းကလေးများ ဘယ်လောက် ရှိနေဦးမည်ကိုလဲ မမှန်းတတ်တော့ပါ ။ ကျွန်တော်ကတော့ သြော် ။။။။။။။။။။။။။။ ဒါလားဟေ့ living together ဟုပင် ငြီးတွားနေချင်ပါတော့သည် ။။
6:57 pm | Labels: မှတ်သားစရာ
((၁.) တစ်ခါက ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးဟာ သားတော်(၁ဝ)ပါးထဲကနေ အမွေဆက်ဆံသူတစ်ယောက်ကိုရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘုရင်ကြီးဟာ ပညာရှိမှူးမတ်တစ်ဦးနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားတိုင်ပင်ပြီး လမ်းဘေးဝဲယာမှာရေရှိတဲ့ လမ်းတစ်ခုပေါ် ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးကို ချထားလိုက်တယ်။ အဲဒီလမ်းပေါ်ဖြတ်လျှောက်သူတိုင်းဟာ ကျောက်တုံးပေါ် ကျော်တက်မလား! ကျောက်တုံးကို ဘေးဖယ်မလား! ကျောက်တုံးကို ကွေ့ပတ်မလား! ကျောက်တုံးကြီးရဲ့အတားအဆီးကို ခံကြရမှာဖြစ်တယ်။
ဘုရင်ကြီးက သားတော်တွေခေါ်ပြီး မှူးမတ်ဆီကို လျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ပို့ဖို့ အဲဒီလမ်းကို ဖြတ်စေခဲ့ပါတယ်။ မင်းသားတွေက ဘုရင်ကြီးရဲ့အမိန့်အတိုင်း မှူးမတ်လက်ထဲကို စာအရောက်ပို့ခဲ့ကြတယ်။
ဘုရင်ကြီးက "ချစ်သားတို့.. အဲဒီလမ်းကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ကြသလဲ?" လို့မေးတော့....
သားတော်တစ်ဦးက "ကျောက်တုံးကြီးပေါ် ဖြတ်ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်"
နောက်သားတော်တစ်ဦးက "လှေလှော် ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်"
သားတော်တချို့က "ရေထဲဆင်းကူးပြီး ဖြတ်ကျော်ခဲ့ပါတယ်" လို့ဖြေခဲ့ကြတယ်။
သားတော်အငယ်ဆုံးက "လမ်းအတိုင်း သွားခဲ့ပါတယ်" လို့ဖြေတော့ ဘုရင်ကြီးက "လမ်းမှာ ကျောက်တုံးကြီး ကာဆီးမထားဘူးလား?" လို့ ပြန်မေးပါတယ်။
"ကျောက်တုံးကို သားတော် အားစိုက်တွန်းလိုက်တာနဲ့ ကျောက်တုံးကြီးက ချောင်းထဲကျသွားပါတယ်"
"ဒီလောက်ကြီးတဲ့ကျောက်တုံးကို လက်နဲ့တွန်းဖို့ သားတော်ဘယ်လိုစဉ်းစားခဲ့သလဲ?"
"သားတော်က ကြိုးစားပြီးတွန်းကြည့်ရုံပါ.. ဒါပေမဲ့ တွန်းလိုက်တာနဲ့ ကျောက်တုံးက ရွေ့သွားပါတယ်"
တကယ်တော့ ဘုရင်ကြီးက မှူးမတ်နဲ့တိုင်ပင်ပြီး ပေါ့တဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ "ကျောက်တုံးကြီး"ကို ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရာဇဝင်ပုံပြင်တွေထဲက အတိုင်းပါပဲ... နောက်ဆုံးမှာ ကြိုးစားအားထုတ်လိုစိတ်ရှိတဲ့ သားတော်ငယ်လေးကပဲ ဘုရင်ရဲ့အမွေကို ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်။
ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို တခြားလူလက်ထဲ ပုံအပ်တာ၊ တခြားတစ်ယောက်ဆီပုံအပ်ပြီး ကိုယ်က ဘာကြိုးစားအားထုတ်လိုစိတ်မှမရှိဘဲ တခြားလူကိုသာ ယုံကြည်တာဟာ အရမ်းအန္တရာယ်များပါတယ်။ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ကိုယ်တိုင်ပဲဖန်ဆင်း၊ ကိုယ်တိုင်ပဲဖမ်းဆုပ်နိုင်ဖို့ သင်ယူတတ်ရပါမယ်။
(၁၉၆ဝ)ခုနှစ်က ဟားဗပ်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခ Rosenthalဟာ ကယ်ရီဖိုးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျော်ကြားတဲ့ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းစဖွင့်ချိန်မှာ Rosenthalဟာ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးထံ ခွင့်ပန်ပြီး ဆရာ/ဆရာမသုံးဦးကို ရုံးခန်းထဲ စေလွှတ်စေခဲ့တယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို Rosenthalက "ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေထဲမှာ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဒီကျောင်းက အထူးချွန်ဆုံးသင်ကြားနိုင်တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ စီစစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ အထက်မြက်ဆုံးကျောင်းသား အယောက်(၁ဝဝ)ကို အတန်းသုံးတန်းခွဲပြီး ခင်ဗျားတို့ကို သင်ကြားခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့ အသိဉာဏ်က တခြားကျောင်းသားတွေထက် မြင့်ပါတယ်။ သူတို့ဒီထက်အမှတ်ကောင်းအောင် ခင်ဗျားတို့ သင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်" လို့ပြောတော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက ဝမ်းသာအားရ "အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားမယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။
ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးကလည်း ဒီကျောင်းသားတွေကို တခြားကျောင်းသားတွေကို ဆက်ဆံသလိုပဲ သာမန်ဆက်ဆံရမယ်။ ကျောင်းသားနဲ့ ကျောင်းသားမိဘတွေကိုလည်း သူတို့ဟာ စီစစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်း မသိစေရပါဘူးလို့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
တစ်နှစ်နေပြီးနောက် အဲဒီအတန်းသုံးတန်းက ကျောင်းသားတွေက တစ်ကျောင်းလုံးရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ဒီအချိန်ကျမှ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို အဖြစ်မှန်ပြောပြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီကျောင်းသားတွေဟာ တမင်စီစစ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ထက်မြက်ကျောင်းသားတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေထဲက ရရာ ရွေးကောက်ယူလိုက်တဲ့ သာမန်ကျောင်းသားတွေပဲဖြစ်တယ်။
ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ ထင်မှတ်မထားခဲ့တဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေက သူတို့ရဲ့သင်ပြမှု အဆင့်မြင့်တယ်လို့ပဲ မှတ်ယူခဲ့ကြတယ်။
ကျောင်းအုပ်က နောက်အဖြစ်မှန်တစ်ခုကို ပြောပြပြန်တယ်။ တကယ်တော့ ဆရာ၊ ဆရာမတွေကို တစ်ကျောင်းလုံးထဲက အထူးချွန်ဆုံးကို ရွေးထုတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရရာ ရွေးကောက်ယူလိုက်တဲ့ သာမန်ဆရာ၊ ဆရာမတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
လောကမှာ မွေးရာပါ ဉာဏ်ကြီးရှင်၊ ပါရမီရှင်ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ တကယ်တော့ ဉာဏ်ကြီးရှင်၊ ပါရမီရှင်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုမှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ တိမ်မြှုပ်နေတဲ့စွမ်းရည်တွေကို ထုတ်ဖော်ပြီး ကိုယ့်ကံကြမ္မာကို ပြောင်းလဲတာပဲဖြစ်တယ်။ မလုပ်နိုင်ဘူး၊ မဖြစ်ပါဘူးဆိုသူတွေက ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲက စွမ်းရည်တွေကို ထုတ်မသုံးဘဲ ဆက်လက်တိမ်မြှုပ်ထားစေတာပဲဖြစ်တယ်။
ပြတိုက်ကို အလည်လာသူတစ်ဦးက ပြတိုက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို မေးတယ်။
"ဒီ ငါးမန်း ဘယ်လောက်ကြီးနိုင်သလဲ?"
"ဒါက ခင်ဗျားရဲ့ ငါးကန်ပေါ်မူတည်ပါတယ်"
"ငါးကန်ထဲမှာဆိုရင် ငါးကန်ရဲ့အကြီးအငယ်နဲ့ ငါးမန်းအကန့်သတ်ခံထားရပါတယ်။ ပင်လယ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ ငါးမန်းတွေဟာ ခြင်္သေ့တစ်ကောင်ကိုမြိုနိုင်တဲ့ထိ ကြီးနိုင်ပါတယ်"
ပတ်ဝန်းကျင်က လူတစ်ယောက်ရဲ့အတွေးအမြင်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။ ပန်ဝန်းကျင်က လူရဲ့တွေးတောခြင်းကို ကန့်သတ်နိုင်သလို လူကလည်း ကိုယ့်ရဲ့တွေးတောခြင်းကို ကိုယ်တိုင်ကန့်သတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်မထားပါနဲ့။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် ပြောင်းလဲခြင်းက စတင်နိုင်ပါတယ်။
6:56 pm | Labels: မှတ်သားစရာ
မျောက် ၅ ကောင်ပုံပြင်
တစ်ခါက…သိပ္ပံပညာရှင်တစ်စုဟာ မျောက် ၅ကောင်ကို လှောင်အိမ်ထဲထည့်ပြီး စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်..။ လှောင်အိမ်ရဲ့  အလယ်မှာတော့ လှေခါးတစ်ခုကိုထောင်ထားပြီး လှေခါးထိပ်မှာ ငှက်ပျောသီးတစ်ဖီးကိုတင်ထားပါတယ်..။ မျောက်တစ်ကောင်ကောင်ဟာ လှေခါးထိပ်ကငှက်ပျောသီးကို တက်ယူတဲ့အခါတိုင်း မျောက်လှောင်အိမ်ပေါ်ကနေ မျောက်အားလုံးပေါ်ကို ရေခဲရေနဲ့လောင်းချပါတယ်..။
ခဏကြာမှာတော့ မျောက်တွေဟာ ငှက်ပျောသီးတက်ယူရင် ရေခဲရေလောင်းချခံရတာကို သတိထားမိလာကြပါတယ်..။ ငှက်ပျောသီးကိုယူဖို့လည်း လက်လျော့လိုက်ကြတယ်..။သူတို့ထဲက တစ်ကောင်ကောင်က လှေခါးပေါ်တက်တိုင်း ကျန်မျောက်တွေက ဆွဲချ..ထုကြထောင်းကြသတဲ့..။
သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ လှောင်အိမ်ထဲက မျောက်တစ်ကောင်ကိုထုတ်ပြီး မျောက်အသစ်တစ်ကောင်ကို အစားထိုးထည့်လိုက်ပါတယ်..။ မျောက်အသစ်က ရေခဲရေအကြောင်းကိုမသိတော့ ငှက်ပျောသီးမြင်တာနဲ့ တက်ယူဖို့ကြိုးစားတာပေါ့..။ သူလှေခါးပေါ်တက်တိုင်း ကျန်တဲ့မျောက်တွေက ဆွဲချရိုက်နှက်ကြပါတော့တယ်..။ ဒီတော့ နောက်ရောက်လာတဲ့မျောက်ကလည်း ငှက်ပျောသီးယူရင် အထောင်းခံရတယ်ဆိုတာသိပြီး လက်လျော့လိုက်တယ်…။
နောက်တစ်ခါ မျောက်အဟောင်းထဲကတစ်ကောင်ကို အခြားမျောက်သစ်တစ်ကောင်နဲ့ လဲလိုက်ပြန်တယ်..။ အလားတူပဲ ဒီမျောက်သစ်လည်း ငှက်ပျေားသီးတက်ယူတာနဲ့ အထောင်းခံရတာပဲ…။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ပထမဆုံးအလဲခံရတဲ့ မျောက်ကလည်း ဒုတိယမျောက်သစ်ကို ဝင်ဆော်ပါသတဲ့..။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့တုန်းကလည်းဒီလိုပဲ အထောင်းခံရလို့ သူကလည်းပြန်ထောင်းတာပါ..။
ဒီလိုနဲ့မျောက်တွေကို တစ်ကောင်ချင်း အစားထိုးလိုက်တာ..နောက်ဆုံးမှာ မျောက်အသစ်တွေချည်းပဲကျန်ပါတော့တယ်…။ သူတို့ဟာ ရေခဲရေအကြောင်းကို မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်..ငှက်ပျောသီးကိုမယူရ၊ ယူတဲ့မျောက်ကို ထုထောင်းရမယ်..ဆိုတဲ့အယူကိုတော့ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေမြဲပါပဲတဲ့..။
ကျနော်တို့ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေကြရပါတယ်..။ နေ့စဉ်ဘဝမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချတဲ့အခါ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံတွေ သူတစ်ပါးအတွေ့အကြုံတွေ ဓလေ့ထုံးတမ်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေရဲ့  လောင်းရိပ်မိနေတ⁠တ်ကြပါတယ်..။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးခွန်းလေးနှစ်ခုလောက်မေးကြည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်…။
(၁) သင်ခံယူထားတဲ့ အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေဟာ..ကိုယ်တိုင်စိစ⁠စ်ပြီးအမှန်တရားကိုမြင်လို့ ကျင့်သုံးနေတာလား..
(၂) သင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အပြုမူတွေဟာလည်း လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်မို့၊ သူများလုပ်တာတွေ့လို့ လိုက်လုပ်နေတာလား ၊ ကိုယ်တိုင်စီစ⁠စ်ပြီး လုပ်သင့်လို့ လုပ်နေတာလား ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးကြည့်ပါ…
ဒီမေးခွန်းတွေအတွက် အဖြေမရှိရင်တော့.. ကျုပ်တို့ဟာ ပုံပြင်ထဲကမျောက်တွေလိုပါပဲ..။
အထူးအဖြင့် ကျနော်တို့ နိုင်ငံကလူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပုံသွင်းခံ၊ မှိုင်းတိုက်ခံထားရပါတယ်…။ ပုံပြင်ထဲက မျောက်တွေကို လုပ်ထားသလိုမျိုးပါပဲ…။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ “ တို့လူလေးများ ဆိုသလေး….” လို့ဆိုလိုက်ရင် “ ဝေ.. လေ…လေး…” ဆိုတာတွေများပါတယ်…။ ဝေလေေ⁠လတွေများတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မရှိဘူး။ ဘယ်သူမှရှေ့ မထွက်ချင်ဘူး။ မထွက်ရဲဘူး။ သူများထွက်ရင်လည်း နောက်ကနေဆဲတယ်..။ ခုခေတ်က အင်တာနက်ခေတ်ဆိုတော့ online ပေါ်ကနေ လက်သီးလက်မောင်းတွေတမ်းကြ.၊ ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်တွေဆဲလိုက်ကြ..။ ဆဲတဲ့သူတွေကြည့်ပြန်တော့ ဘယ်သူမှန်းမသိ ဘယ်ကမှန်းမသိ ၊ ဘာမှ ကိုယ်ရေးအချက်အမှန် .. ဓာတ်ပုံမှန်မတင်ရဲတဲ့..ကိုယ့်စကားကိုယ်တာဝန်မယူရဲ ကိုယ်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်နေပြန်တယ်..။
ဒါတွေအသာထားလို့ ကျနော့သယ်ရင်းတွေအနေနဲ့တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့  မှိုင်းတိုက်မခံရအောင် ပုံသွင်းမခံရအောင်.. ကိုယ့်ရဲ့  အတွေးအခေါ်နဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို စိစ⁠စ်ကြဖို့ အမှန်တရားကိုရှာဖွေကြဖို့ စေတနာစကားပါးလိုက်ရပါတယ်ဗျား…
6:05 pm | Labels: သတင်း
မြွေကို အရက်နဲ့ စိမ်သောက်တာက ကျန်းမာရေး အတွက် အကျိုးရှိ တယ်လို့ ယူဆ ကြပါတယ်။ တကယ် လို့ အဲ့စိမ်ထား တဲ့ မြွေက အသက် ပြန်ရှင်လာပြီး ထပေါက် တာမျိုးက တရုတ်ပြည်မှာ တကယ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Shejiu ဆိုတာ ရိုးရာအရက် တစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ မြွေများကို အရက်နှင့် စိမ်ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး Baijiu နဲ့လည်း တူပါတယ်။
အဆိပ်ပြင်း မြွေများကို သဘာဝ အတိုင်း အရက်နဲ့ စိမ်ထားပြီး သောက်တာ က ခန္ဓာကိုယ်အား အညောင်းညာ ပြေစေခြင်း၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအား တိုးပွားခြင်း နဲ့အခြား ကိုယ်တွင်း ရောဂါများပါ ပျောက်ကင်း စေတယ်လို့ ပြောကြ ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး အတွက် ခွန်အား ဖြစ်စေတဲ့ အရက် တစ်မျိုး အနေနဲ့ အာရှမှာ မြွေအရက်စိမ်ကို ဒေသတိုင်း လိုလို သောက်သုံး ကြပါတယ်။ လူတိုင်း သောက်နေကျ ပါပဲ။
ဖြစ်ချင် တော့လည်း တရုတ်ပြည် အရှေ့ မြောက်ပိုင်း မြို့လေး တစ်မြို့မှ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ ဆေးရုံက ဆင်းလာ ပြီးနောက် ၃လကြာ ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ မြွေစိမ် ထားတဲ့ အရက်ကို သောက်လိုက် ရာမှာ ပုလင်း ထဲက မြွေကထပြီး ကိုက်လိုက် ပါတယ်။ အတော့်ကို ကံမကောင်း တာပါပဲ။
Harbin မြို့လေးမှ အမျိုးသမီးက ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲ တိုင်းမှာ အဆစ် အမြစ်ကိုက် ရောဂါ ဝေဒနာကို ခံစားနေရလို့ Shejiu ကိုသောက် သုံးရင် ပျောက်ကင်း တယ်လို့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အကြံပေးတဲ့ အတိုင်း သောက်ဖြစ် ပါတယ်။
အဲ့ဒီ မြွေပွေး စိမ်ထားတဲ့ ပုလင်းကို အောက်ခြေထိ ကုန်အောင် သူမက အရက်ကို သောက်လိုက် ပါတယ်။ သောက်လိုက် တော့ သူမ ဝေဒနာ တွေက ချက်ချင်း ပျောက်သွား သလိုပါပဲ။ ဒါကြောင့် ပုလင်းထဲကို အရက် ထပ်ဖြည့်ဖို့ အစို့ကို ဖွင့်လိုက် ပါတယ်။
သူမအဖုံး ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မြွေပွေးက အသက် ရှင်လာပြီး တွန့်လိမ်ကာ အမောက် ထောင်ပြီး ပုလင်းအပြင်ကို ထွက်လာ ပါတယ်။ သူမ ပုလင်းကို ခါထုတ် လွှတ်မပစ် နိုင်ခင်မှာပဲ မြွေပွေးက သူမ လက်ချောင်း လေးကို ကိုက်လိုက် ပါတယ်။ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်တာကို ကြားကြားခြင်း သူမ မိသားစုက သူမကို အလျင်အမြန် ကူညီပြီး ဆေးရုံကို ပို့ဆောင် ပါတယ်။
Sheiju ကိုမသောက်ရင် ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခုတော့ မြွေကိုက် တာကြောင့် ဆေးရုံကို ရောက်ရ ပြန်ပါပြီလို့ သူမက လက်က ပတ်တီးကို ကြည့်ရင်း ပြောကြား ခဲ့ပါတယ်။
အံ့အားသင့် စရာပါပဲ။ ဒါမျိုး အဖြစ်က ကြုံတောင့် ကြုံခဲပါ။ မြွေပွေးက ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု (Metabolism) နဲ့နှလုံး ခုန်နှုန်းကို ခဏရပ်တန့် ထားပြီး hibernation ဖြစ်စဉ်နဲ့ ငြိမ်နေ ခဲ့တာပါ။မြွေတွေက ဒီလို စိမ်ထားပေမယ့် လေမလုံတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာ အကြာကြီး ပိတ်လှောင် ထားတာတောင် သူတို့ အသက်ရှင် နေနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ထူးခြား ဖြစ်စဉ်ကို မြင်တွေ့ ရမှာပါ။ ဒါက ပထမဆုံး ဖြစ်စဉ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။၂၀၀၉ တုန်းကလည်း ၂လကြာ စိမ်ထားတဲ့ မြွေက ထပေါက်တာမျိုး ဖြစ်ခဲ့ ပါသေးတယ်။ အာဏာပိုင်များက Harbin မြို့အနီးအနား မှာရှိ်တဲ့ ကျေးရွာ များကို မြွှေပွေးနဲ့ အရက်စိမ် ထားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာကို သတိထားဖို့ အရေးပေါ် သတိပေး ကြေငြာခဲ့ ပါတယ်။
4:51 pm | Labels: သတင်း
နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး သင်္ဘော MS Turanor Planet Solar ဟာ မိုနာကိုမြို့ ဟာကျူလီ ဆိပ်ကမ်းမှာ ဆိုက်ကပ်ပြီး ကမ္ဘာ တစ်ပတ် ခရီးစဉ်ကို အဆုံးသတ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီခရီး စဉ်ဟာ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး သင်္ဘော တစ်စီး အတွက် ပထမဆုံး ကမ္ဘာ တစ်ပတ် ခရီးစဉ် အဖြစ်လည်း
သတ်မှတ် ခံခဲ့ရ ပါတယ်။ ဒီသင်္ဘောမှာ စတုန်းရန်း မီတာ ၅၀၀ ခန့်ရှိတဲ့ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင် ပြားတွေ တပ်ဆင်ပြီး တည်ဆောက်မှု ကုန်ကျစရိတ် ဒေါ်လာ ၁၆ သန်း ရှိခဲ့တယ်။
ဒီသင်္ဘောကို အလွန် ပေါ့ပါးတဲ့ ကာဘွန်ဖိုက်ဘာ ကိုယ်ထည်နဲ့ တည်ဆောက် ထားပြီး ဒီဇိုင်းကိုလည်း ရေခွဲအား အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် ဖန်တီး ထားပါ တယ်။ မြင်းကောင်ရေ ၂၆ ကောင်အား ရှိတဲ့ လျှပ်စစ် မော်တာ ၄ လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး တစ်နာရီကို ရေမိုင် ၁၄ မိုင်နှုန်း မောင်းနှင် နိုင်ပါတယ်။
အရှည် ၁၁၅ ပေ ရှိပြီး အရှည်ဆုံး နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး သင်္ဘော စာရင်းဝင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယခု ကမ္ဘာတစ်ပတ် ခရီးစဉ် အတွက် အချိန် ၅၈၅ ရက်ကြာ ခရီးနှင်ခဲ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ MS Turanor PlanetSolar သင်္ဘောကို သုတေသန လုပ်ငန်း တွေမှာ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်သလို ဈေးကောင်းပေး ၀ယ်ယူ မယ့်သူ ပေါ်လာရင်လည်း ပြန်လည် ရောင်းချ နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Ref : Techspacejournal
4:50 pm | Labels: ထူဆန်းထွေလာ, သတင်း
by A ShinNyar Neindamwd's photo. Facebook